Daawo: Wariye BBC ka socda oo booqday Kismaayo sheegayna in habeen kastaa Shabaabku gudaha magaalada soo galaan – idalenews.com
Daawo: Wariye BBC ka socda oo booqday Kismaayo sheegayna in habeen kastaa Shabaabku gudaha magaalada soo galaan
Wariye ka tirsan BBC qeybta TV-ga oo hadda ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxaa uu soo diyaariyey warbixin uu uga hadlayo xaalka magaalada kismaayo ay ku sugan tahay.
Waxa uu sheegay wariyahan in magaalada kismaayo habeenkasta ay soo weeraran kooxda Al-Shabaab waxaase uu sheegay inay arrintaasi ka hor tagaan oo walib adib u celiyaan ciidanka AMISOM ee magaalada ku sugan.
Waxa uu warbixintiisa maanta kusoo bandhigay Kismaayo oo habeenimo ay u gashay kadibna toos loo arkayo xabada ay is dhaafsanayaan Al-Shabaab iyo ciidanka Amisom ee jooga Kismaayo , taasi oo ka dhigeysa in ammaanka magaaladaasi uusan aheyn mid fadhiya.
Dhinaca kale wariyahan ayaa waxaa uu warbixintiisa kusoo qaatay xaalada caafimaad ee magaalada kismaayo, isagoona booqday isbitaalka guud ee Kismaayo. Waxaana halkaasi uu kula kulmay dhaqtarka guud ee isbitaalkaasi kaasi oo sheegay inay baahi dhinaca caafimaadka ah inay jirto.
Waxaana uu dhaqtarkan uu sheegay in xilliyada ay dagaalada ama qaraxyada dhacaan ay dhibaato kala kulmaan bukaanka laftooda oo midkasta uu rabo in isaga la hormariyo, haddii aad mid daawee is dhahdaha buu yiri kan kale uu qalad kuu fahmayo.
Daawo: Mudaaharaadyo Madaxweyne Xasan Sheekh looga soo horjeedo oo ka dhacey Xarunta International Discussion ee magaalada Columbus Ohio
Afhayeenka Alshabaab Cali Dheere oo wareysi siiyey Television Channel 4 ee dalka Ingiriiska kana hadlay weerarkii West Gate Mall ee dalka Kenya lagu qaadey